Faah faahin: Ismiidaamin ka dhacay Afgooye | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Faah faahin: Ismiidaamin ka dhacay Afgooye
Faah faahin: Ismiidaamin ka dhacay Afgooye
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Qarax khasaare geystay oo duhurnimadii maanta ka dhacay gudaha degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose, sida ay inoo xaqiijiyeen Maamulka degmada Afgooye.
Qaraxan oo warar kala duwan ay ka soo baxayaan ayaa dadka waxa ay ku sheegeen inuu fuliyay ruux kaxeynayay Gaari Qaraxyo ay saaran yihiin, kaasi oo ka dhacay afaafka hore ee xarun Ciidanka uu tababaray Imaaraadka ay ku leeyihiin wadada aada Buundada Yar oo aan sidaas uga fogeyn xerada Ciidamada Burundiga.
Qaraxa kadib ayaa waxaa la maqlay rasaas fara badan oo ay rideen Ciidanka Dowladda Federaalka, gabi ahaanba waxa ay xireen Ciidamada goobta uu qaraxa ka dhacay, waxaana gaaray Ciidamo dheeraad ah oo hubeysan.
Gaadiidka gargaarka deg dega ah ee ay leeyihiin Ciidamada iyo kuwa laga leeyahay goobaha caafimaadka ayaa goobta uu qaraxa ka dhacay tagay, waxayna Muqdisho u soo qaadeen dadkii ku waxyeeloobay qaraxaasi.
Guddoomiye ku xigeenka Gobolka Shabeellaha Hoose C/fitaax Xaaji Cabdulle oo la hadlay Idaacadda Risaala ayaa sheegay Qaraxan loo adeegsaday Gaari Caasi ah oo Miineysan, laguna weeraray xero Ciidanka Imaaraadka ay ku leeyihiin degmada Afgooye, balse aanay xaqiijin Karin khasaaraha dhabta ah, dibna ka soo sheegi doonaan.
Khasaaraha horudhaca ah ee qaraxan ayaa sheegaya in ay geeryoodeen dad ku dhow 8 Qof, halka ay dhaawacmeen in ka badan 10 qof oo Ciidamo ay ku jiraan.
Ururka Al-shabaab oo weerarkan uga hadlay baraha ay wararkooda ku faafiyaan ayaa waxa ay ku sheegteen in Qarax Ismiidaamin ah ay la beegsadeen xaro ay leeyihiin Ciidanka Imaaraadka, ayna ku dileen Ciidamo, kuna burburiyeen dhismaha saldhigga.
Dhaq dhaqaaqa degmada Afgooye ayaa hakad galay, degmada waxaa ka jirta cabsi ku aadan in mar kale ay ka dhacaan falal ka baxsan amniga, wadooyinka ayaa waxaa la dhigay Ciidamo Dowladda ka tirsan oo ammaanka xaqiijinaya.
Shalay oo ugu dambeysay Barta Kontorool ee degaanka Siinka-dheer ayaa waxaa ka dhacay Qarax, kaasi oo uu fuliyay nin ka tirsanaa Shabaab oo kaxeynayay gaari PREMIO ah, waxaana qaraxaasi uu dilay laba qof oo mid uu Askari ahaa halka midka kalena uu ahaa Ismiidaamiyaha, sida ay sheegtay Wasaaradda Amniga Soomaaliya.